सरल, सहज र जनसेवामा समर्पित « Anumodan National Daily
सरल, सहज र जनसेवामा समर्पित
प्रकाशित मिति : १० असार २०७४, शनिबार १७:०८
यतिवेला धनगढी उपमहानगरपालिका स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहमा निकै चर्चामा छ । सुदूरपश्चिम अर्थात् प्रदेश नम्बर ७ जस्तो चर्को जातीय छुवाछूत तथा सामाजिक विभेद रहेको मानिएको क्षेत्रको धनगढी उपमहानगरपालिको प्रमुख (मेयर) पदमा नेपाली कांग्रेसले दलित समुदायका नृप ओडलाई उम्मेदवार बनाएपछि चर्चा चुलिएको छ ।
‘दलितलाई कसरी नमस्ते गर्ने ? संकीर्ण सोचका व्यक्तिहरूले यदाकदा व्यक्त गर्ने भावनाले दलित समुदायलाई मात्रै होइन, बौद्धिक वर्ग, पेसाकर्मी, अधिकारकर्मी सबैलाई आहत बनाइराख्दा मेयरका उम्मेदवार ओडले धेरै ठाउँमा दोहो¥याए– मलाई नमस्ते गरिराख्नु पर्दैन, म जनताको सेवाका लागि, उपमहानगरपालिका र जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्ने भएकोले सबैलाई म नै नमस्ते गर्छु, गरिरहने छु । दलित समुदायको उम्मेदवार र नमस्तेको प्रसंगले यति बढी पीडाजनक चर्चा पायो कि, प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत धनगढीको एक चुनावी सभामा भने– दलित समुदायबाट आएका नेता नृप ओडलाई हामीले उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनायौं । ‘कोही दलितलाई कसरी नमस्ते गर्ने ? भनेर भन्नुहुन्छ रे’ सभापति देउवाले भने– तपाईहरूले उहाँलाई नमस्ते गर्नै पर्दैन, उहाँले नै तपाईहरूलाई नमस्ते गर्नुहुन्छ । यति सरल र सहज नेता, मेयर तपाईले पाउनुहुन्न ।
२०२९ साल फागनु २१ गते शनिबार अछामको कुस्कोटमा बुवा करनसिंह ओड र आमा कमलादेवीको जेठो छोराका रूपमा जन्मिएका नृपबहादुर ओडको पाँच वर्षसम्म भारतको मुम्बईमा बित्यो । उनका बुबा मुम्बईमा रोजगार गर्दथे । पा“च वर्षको उमेरमा अछाम फर्किएका उनी एक स्थानीय स्कूलमा भर्ना भए । एक कक्षा पास गरेपछि उनी धनगढीको त्रिनगर स्कूलमा भर्ना भए । ‘बुवाले धनगढीको हसनपुरमा घर बनाउनु भएको थियो’ उनले बाल्यकाल सम्झिए– मेरो सामान्य खानलाउन पुग्ने परिवार हो । म आमा र दिदीसँगै धनगढीमा बस्न थाले । २०४६ सालमा एसएलसी पास गरे । भारतबाट आइए उत्तीर्ण गरे र २०४८ सालमा धनगढी फर्किएर स्नातक तहमा भर्ना भए । तर, उनमा राजनीतिको चस्का लाग्न थालिसकको थियो । फलस्वरूप स्नातक तह उत्तीर्ण नहुँदै उनको पढाई ब्रेक भयो । त्यतिवेला धनगढीमा पुष्करनाथ ओझा, किशोर बम नेविसंघका प्रभावशाली नेता थिए । उनी भन्छन्– मैले विपि कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता महान नेताको नाम र राजनीतिबारे अलिअलि सुनेको थिए । शेरबहादर (दाई) देउवा को नाम सुनेको थिए । २०४३ सालमा मेरा बुवा का“ग्रेसका तर्फबाट अछाममा वडाध्यक्ष उम्मेदवार भएर निर्वाचित हुनु भएको थियो । मलाई अलिअलि राजनीति र कांग्रेसप्रति आकर्षण बढ्दै गएको थियो । यता धनगढीमा पुष्कर, किशोर दाइहरूलाई देखेर राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा बढ्दै गयो ।
स्कूलमा उनी फुटवलका राम्रा खेलाडी थिए । ‘म स्कुलमा फुटवल खेल्थें । त्यस्तै, युथ क्लवबाट खेल्थे । स्कूल, जिल्लाबाट म पनि छनोट हुन्थे, तर जहिले पनि मलाई डेमोक्राट भनेर राष्ट्रिय खेलाडी छनोटमा फेल गर्दथे’ उनले भने– यसले पनि मलाई पञ्चायतप्रति घृणा बढ्यो, कांग्रेसप्रति आकर्षण बढ्दै गयो ।
बाल्यकालदेखि नै समाज सेवाभावका ओडलाई यही स्वभावले राजनीतिमा प्रवेश गर्न अझ बढी प्रेरित ग¥यो । २०४६ सालमा जनआन्दोलन सुरु भयो । म नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय भए ।
सरल, सहज र जनताको काममा जहिले पनि समर्पित नेताको छवी बनाउन सफल ओडको युवाकालमा धनगढीमा विपिलाई पहिलो पटक देखेको क्षण अहिले पनि ताजै छ । उनी सम्झिन्छन्– दश वर्ष जतिको उमेर थियो । २०३८ सालको अन्त्यतिर हो वा ०३९ सालको शुरुमा हो, विपि कोइराला धनगढी आउने सुन्यौ । म निकै रोमाञ्चित थिए, उहा“लाई हेर्नका लागि । मलाई अहिले पनि स्मरण छ– सायद अहिलेको जिल्ला विकास समितिको प्रांगणमा हो क्यारे उहा“को कार्यक्रम थियो । निकै भिड थियो । म दौडिएर उहाँलाई हेर्न गए । दौड्दै काँटेतारबाट छिर्न खोज्दा मेरो कमिज च्यातियो । मैले भिडको पछाडिबाट उफ्रिउफ्रि उहाँलाई हेरे । उहा“ले सेतो कुर्तासुरुवाल, इष्टकोट लगाउनु भएको थियो । मैले तेत्रो महान नेतालाई देख्न पाए । अहिलेसम्म पनि त्यो क्षण बिर्सन सकेको छैन ।
०४९ सालमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बनेपछि उनी पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय भए । २०५३ सालमा वडा नम्बर ५ को वडा सभापति, त्यसपछि कृष्णबहादुर महरा नगर सभापति हुँदा नगर सचिव भए । कांग्रेस विभाजन हुँदा र पछि एकीकरण हुँदा नगर सभापति भएका उनी अहिले पनि नगर सभापति छन् । सेती अञ्चल अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति सदस्य रहेका उनी २०६४÷०६५ तिर धनगढी नगर विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त भए । ‘मेरो कार्यकालमा केही उल्लेख्य काम भएका छन्’ उनले भने– हामीले वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म एक सय ९८ बिघा जमिनको लालपूर्जा वितरण ग¥यौं । अहिले धनगढी रंगशाला निर्माण भएको जमिनको लालपुर्जा थिए । मैले अरु राजनीतिक दलको असहमति भए पनि लालपुर्जा प्रदान गरे ।
सधैं राजनीति र जनताको कामलाई प्राथमिकता दिनुपरेका कारण परिवार, छोराछोरीका लागि धेरै समय दिन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘यति हुँदाहुँदै पनि श्रीमति र घरपरिवारबाट मैले पूर्ण सहयोग पाइरहेको छु’ उनी भन्छन् । उनले आफ्नो टोल (जाई) मा ०६० सालमा शैलेश्वरी ईंग्लिस बोर्डिग खोले ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदको टिकटको दौडमा रहँदा र टिकट पाइसकेपछि पनि ‘दलित’ को प्रसंगले उनी केही खिन्न छन् । ‘तर मैले अहिलेसम्म आफ्नो जीवनमा त्यस्तो खासै अनुभूति गरेको छैन’ उनी भन्छन्– बुवाआमाले मलाई कुनै किसिमको कमि महसुस हुन दिनु भएन । स्कूलकालदेखि नै मेरा सबै जातजातिका साथी हुनुहुन्छ । मसंग सबैले सहज व्यवहार गर्नुहुन्छ । राजनीतिमा पनि मैले समाजका सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, धर्मसंंस्कृतिका मानिसबाट माया पाएको छु ।
राजनीतिमा सबैको महत्तवाकांक्षा हुन्छन्, उद्देश्य, लक्ष्य र सपना हुन्छन्, तपाईंका के छन् ? चुनावी प्रचारप्रसारमा बिहानदेखि अबेर रातिसम्म व्यस्त मेयरका उम्मेदवार ओडले भने– मेरो उद्देश्य समाजसेवा हो, जनताको विकास हो, गरिबी निवारण हो । यो क्षेत्रीयता, जातीयता, भेद्भाव आदि सबै गरिबीका कारण सिर्जना हुन्छन्, त्यसैले सबैभन्दा पहिले सबैलाई शिक्षित र आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु पर्छ, अनि यी सबै कुरा गौण हुन्छन् ।
उपमहानगरपालिकाको मेयरका रूपमा चाही तपाईंको सपना चाही के हो नि ? उनले सहज उत्तर छ– मैले यस्तो काम गर्न चाहन्छु कि सबैले भनुन्– वाह ∕ नृपले कस्तो राम्रो काम ग¥यो । मेरो सपना धनगढीलाई साच्चै नै मुलुकको नमुनायोग्य, सुन्दर, स्वच्छ र समृद्ध शहर बनाउने हो । आम उपमहानगरबासीले यहाँको बासिन्दा भएकोमा गौरव गर्न पाउन् ।
उनले आफ्नो पार्टी कांग्रेसले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमार्फत धनगढीको दीर्घकालीन विकासका योजना र खाका जनतासामु प्रस्तुत गरिसकेको बताए । थपे– २० वर्षदेखि स्थानीय चुनाव हुन नसकेका कारण जनताका धेरै इच्छा, आकांक्षा र चाहना पुरा हुन पाएका छैनन् । बाटोघाटोको समस्या छन् । स्तरीय बाटो छैन । वर्षामा डुवान र कटानको समस्या छ । सबै वडाटोलमा शुद्ध खानेपानीको सुविधा छैन । बेरोजगारी उत्तिकै छ । व्यवस्थित ढल निकास छैन । नगरका कतिपय ठाउँका बासिन्दाको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच छैन । यी र अरु थुपैं समस्याको हामीले राम्ररी अध्ययन गरेका छौं । अब काम गर्ने वेला हो । हामी पा“च वर्षको अवधिमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका जुनसुकै ठाउँका बासिन्दाले आधारभूत सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नेछौं ।
चुनावमा सबै उम्मेदवार र दलले एकसेएक आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । तपाईंले पनि गर्नुभएको छ, तर यी योजना कसरी पुरा गर्नुहुन्छ, स्रोत कहा“बाट ल्याउनु हुन्छ ? प्रश्न खस्न नपाउँदै उनले भने– हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्दछ । हामीले उपमहानगरपालिकाको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने हो । हामीसंग ठोस योजना भयो भने स्रोतको कमी हु“दैन भन्ने मेरा पनि अनुभव छ । उदाहरणका लागि सरकारले १९ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकीका लागि बजेट दिएको छ, अब हामीले जग्गाको प्रबन्ध ग¥यौं भने तत्काल काम शुरु भइहाल्छ । मुख्य कुरा काम गर्ने इच्छाशक्ति हो । त्यस्तै करको कुरा गरौं– अहिले ५, १० रुपैयाँ लाग्ने कर पनि छन्, तर करहरू सदुपयोग भएको छैन । सबै कर असुली पनि भएका छैनन् । साना व्यापारीले कर तिर्ने तर ठूलाले छल्ने प्रवृत्ति छ । स्रोत भन्ने एक जनाले मात्रै तिरेर हु“दैन । हामीले कर संकलन व्यवस्थित ग¥यौं भने उपमहानगरपालिकामा निकै ठूलो रकम प्राप्त हुने छ ।
त्यस्तै, हामीसंग थुप्रै सामुदायिक वन छन्, तर व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । धेरै ठूलो आयस्रोत सामुदायिक वनबाट पनि आउँछ । वनमा ढलापडा रूखको व्यवस्थापन, चोरीनिकासी नियन्त्रण गरियो भने ठूलो आयस्रोत बढ्छ । धनगढीमा कोल्डस्टोर निर्माण होस् वा पशुहाट बजार, पार्किंङस्थल, सार्वजनिक शौचालय जस्ता धेरै योजनाका लागि धेरै दातृ निकायले प्रस्ताव गरेको अवस्था छ । त्यसैले सवाल स्रोतको होइन्, इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र इमान्दारिताको हो ।
म सामान्य घरबाट आएको सामान्य व्यक्ति हुँ । धेरै जनताको धेरै कुरा सुन्छु, कम बोल्छु । धेरै ठूला कुरा गर्दिन । जहिले पनि जनताका समस्या र विकासका कुरामा चिन्ता र चिन्तन गर्छु । म चाहन्छु– मेरो हातबाट सबैको भलो होस् । म सामान्य र सरल जीवन बिताउन चाहन्छु । साधारण र शालिनता अपनाउन चाहान्छु । सायद यसैले भएर होला मलाई सबैले माया गर्नुहुन्छ । अलिकति पहिलेको कुरा स्मरण गर्छु– सेती अञ्चल अस्पतालमा सदस्य हुँदा पार्किङको व्यवस्था ग¥यौं । नया“ अस्पताल भवन निर्माणको ठेकेदार भाग्यो । हामीले ठेकेदारलाई बुटवलबाट ल्याएर अस्पतालको काम पुरा गरायौं । अस्पतालको ६० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था थियो, तर हामीले त्यस्तो हुन दिएनौं । म जहा“ रहेर काम गर्दा पूर्ण समर्पित र इमान्दार भएर काम गर्नूपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । म नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा शिवनगर खानेपानी योजना शुरु भयो । सो खानेपानी आयोजनाको ग्यारेन्टी कसले लिने भन्ने सवाल उठ्यो । मैले भने यसको ग्यारेन्टी धनगढी नगरपालिकाले लिनुपर्छ । किनकि कुनै संस्थाले हाम्रो लागि काम गर्छ भने सो कामको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी हामीले किन नलिने । ऐश्वर्य विद्या निकेतन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर काम गर्दा होस् वा अन्य कुनै पनि ठाउँमा जिम्मेवारी बहन गर्दा होस् मैले सधैं सकारात्मक रूपमा काम गरेको छु जस्तो लाग्छ ।
चुनाव जित्नेमा चाही कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ त ? उनमा पूर्ण विश्वासको भाव देखियो । भने– पहिलो आधार पार्टीको मजबुत संगठन छ । व्यक्तिगत रूपमा मैले सधैं जनताका पक्षमा काम गरेको छु, प्रत्येकको घरदैलो गएको छु, बसेको छु ।